Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Cape Verde » RIU Hotels dia manolotra ny hotely vaovao ao Cape Verde
RIU Hotels dia nanokatra ny Riu Palace Boavista, izay hotely fahadimy ao Cape Verde ary ny fahatelo ao amin'ny nosy Boa Vista, taorian'ny fampiasam-bola mitentina 70 tapitrisa euro. Praia das Dunas no misy ny hotely kintana dimy ary manolotra serivisy 24-ora voatokana ho an'ny RIU miaraka amin'ny fahaizan'ny faritry Riu Palace mahafinaritra. Ny trano fandraisam-bahiny, izay misy efitrano 505, dobo telo ary nahandro maro karazana atolotra, hisokatra folo taona taorian'ny nanombohana ny Riu Karamboa, hotely voalohany an'ny rojo ao amin'ny nosy.
Tonga tany Cape Verde ny RIU tamin'ny 2005, rehefa nosokafana tao amin'ny nosy Sal izao ny Riu Palace Cabo Verde ary herintaona taty aoriana, izay Riu Funana no nanokatra varavarana ankehitriny. Ny tale jeneralin'ny hotely RIU, Luis Riu, dia nahita ny tanjaky ny toerana haleha tamin'ny fitsidihany voalohany, noho ny hatsaran-tarehiny sy ny moron-dranomasina, fa ambonin'izany rehetra izany, ny fandriam-pahalemana, ny exoticism ary ny charisma ary ny fahasambarana asehon'ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra ny nosy. Ny fanoloran-tena lehibe nataon'i RIU dia nahatonga trano fandraisam-bahiny dimy, izay misy efitrano 3,480 sy mpikambana miasa miasa miisa 2,500. Isan-taona dia mandray vahiny maherin'ny 235,000 ny trano fandraisam-bahiny any RIU's Cape Verde ary mahatratra 340 tapitrisa Euros mahery ny totalin'ny fampiasam-bola any amin'ireo nosy.
"Cape Verde dia zavatra niainana tsy manam-paharoa. Niatrika ny karazana fanamby ara-pitaovana sy fotodrafitrasa izahay tany, izay niresahanay tamin'ny fampiasàna ny traikefa niavoninay sy ny fanapahan-kevitr'i Cape Verde manokana hampandroso ny indostrian'ny fizahan-tany. Nahazo aingam-panahy ho an'ny mpiasa rehetra tao koa izahay. Azontsika atao izao ny milaza fa manana ekipa matihanina tsara isika, izay mihoatra ny fanefana ny tsy fahampian'ny traikefa amin'ny hafanam-pony sy ny filan'izy ireo hianatra. Raha ny marina, ny hotely vaovao dia hitantana ny mpiasa eo an-toerana izay nitombo tao amin'ny hotely Sal sy Boa Vista, ary eo amin'ny sehatra ahafahan'izy ireo manokatra sy mitantana ireo sampana isan-karazany amin'ity sokajy hotely ity, izay zavatra I tena reharehako manokana. Hatramin'ny andro voalohany dia nahazo ny fon'ireo vahininay ireo olona Cape Verdean. Rehefa nanangana ny trano fandraisam-bahiny voalohany izahay tamin'ny 2005, dia tsy nisy nanampo ny hahatongavan'ity fahombiazana ity. Mameno fahafaham-po antsika izany ary manavao ny fanirianay hanohy ny fanoloran-tena ho an'i Boa Vista sy Cape Verde, "hoy i Luis Riu.
Qatar Philharmonic Orchestra dia manaitra ny mpandeha Qatar Airways amin'ny fampisehoana hazavana